Blockchain News 11 Janoary 2018 - Blockchain News
Janoary 11, 2018 Admin
Blockchain News 11 Janoary 2018
Eks-bola Regulator: Naniry aho ho vola tao Bitcoin rehefa nilaza ny rehetra mba hitandrina tsara
Ara-bola teo aloha regulator Bart Chilton maniry efa vola amin'ny bitcoin sy ny hafa cryptocurrencies malaza indray, rehefa nilaza izy mba hitandrina tsara ny rehetra.
Chilton milaza fa mbola ny “Wild West” nifehy hoavy ivelan'ny tsena, fa nanampy ny fiovaovan'ny bidy goavana efa hatramin'ny “dia nihanalefaka izy.”
Japana Fisco manambara cryptocurrency fandefasana ny tahirim-bola
Zavatra tsy mafy orina ny fampiasam-bola sy ny fikarohana fifanakalozana bitcoin Fisco mpandraharaha dia nanambara fa izany dia hanomboka ny cryptocurrency tahirim-bola.
Avy araka ny mafy fatorana namoaka bitcoin tamin'ny taon-dasa, ny tahirim-bola crypto vaovao dia mihoatra noho ny vola 300 tapitrisa yen ($2.66 tapitrisa) in bitcoin sy ny vola nomerika hafa, araka ny Nikkei.
Ny petra-bola milaza ny tenany ho voalohany amin'ny karazany any Japana.
Arizona mpanao lalàna ny volavolan-dalàna hampahafantatra hamela ny olom-pirenena mba mandoa hetra amin'ny Bitcoin
Ny volavolan-dalàna vaovao atolotra ny Antenimieran-doholona Arizona te, raha ankatoavin'ny, hamela ny olona handoa hetra ny fanjakana mampiasa bitcoin lafy ratsiny na ny hafa cryptocurrencies.
Public firaketana an-tsoratra mampiseho fa ny volavolan-dalàna - notohanan'ny fanjakana Warren Petersen loholona sy ny mpiara-notohanan'ny mpanao lalàna telo hafa - dia nanaiky ny hodinihintsika ao amin'ny Jan. 9. Efa nanomboka nisy niresaka momba ny Antenimieran-doholona ny Arizona Fitsipika Komity bebe kokoa délibération.
Araka ny lahatsoratra, ny fepetra hamela ny fampiasana “ny fandoavam-bola vavahady, toy ny bitcoin na hafa cryptocurrency, mampiasa ataon'ny mpiara-to-mpiara ny rafitra” mba handoavana “hetra sy izay mahaliana sy ny sazy” izay nananan'ny ny governemantam-panjakana.
Arizona mpanao lalàna no voatosika mankasitraka faktiora mifandraika amin'ny teknolojia tamin'ny lasa. Last lohataona, ny mpanao lalàna ny volavolan-dalàna izay nomanina Manaiky blockchain sonia fifanarahana sy marani-tsaina toy ny lalàna manan-kery eo ambany fanjakana. governemanta. Doug Ducey sonia ny fepetra ho lalàna tamin'ny Martsa.
U.S. Marshals service mikasa ny lavanty 3,813 BitCoins
The U.S. Marshals Service dia lavanty eny 3,813 BitCoins nosamborin'ny mifandray amin'ny federaly, olom-pirenena sy ny raharaha ara-panjakana. Ny vola madinika dia mendrika ny efa ho $54 tapitrisa amin'ny vidiny amin'izao fotoana izao.
Ny lavanty ny Sampan-draharahan'ny Fitsarana sampan-draharaha no hitranga mandritra ny fe-potoana enim-ora ao amin'ny Jan. 22. Ny BitCoins hatolotra amidy amin'ny 11 kilalao miendrika biriky, ny lehibe indrindra izay ahitana 813 BitCoins. Ny mpandray anjara dia tsy maintsy hanao petra-bola ny $200,000, ny sampan-draharaha hoy ny fanambaran'i Alakamisy.
US Antenimieran-doholona mba hanao fivoriana mifanakalo hevitra momba ny cryptocurrencies
The U.S. Antenimieran-doholona ny tolotra ara-bola tontonana dia hanao fihainoana ny volana amin'ny tsena ambony firenena dalàna mba hiresaka momba bitcoin miakatra ao anatin'ny ahiahy ny amin'ny loza cryptocurrencies hampidi ny rafitra ara-bola, ny olona amin'ny fahalalana mivantana ny raharaha nilaza Reuters.
Ny Antenimieran-doholona Komitin'ny Banky handray fijoroana ho vavolombelona avy amin'ny entam-barotra Trading hoavy Filohan'ny Commission Christopher Giancarlo sy ny Fiarovana sy Exchange Commission Filohan'ny Jay Clayton tany am-piandohan'ny Febroary, hoy ny loharanom-baovao.
Rosia hanonitra cryptocurrency volavolan-dalàna: Nankatoavina ihany fifanakalozana navela
Rosia Minisitry ny Fitantanam-bola no hanao fanampin'ny cryptocurrency haha ​​ara-dalàna volavolan-dalàna, izay mamela ny raharaham-barotra toy izany ihany ny sasany fananan'ny “ofisialy” fifanakalozana.
Ny Minisitry ny Vola lefitra Alexei Moiseyev nilaza RNS.
Ny lisitry ny fifanakalozana ofisialy dia mbola tsy nekena, izany dia mbola ho “niresaka”.
Moiseev Nanome toky ny fanompoana fa tsy te-mametra ny famindrana ny vola efa ananana crypto, fa manantena hametraka “karazana rafitra ".
“Iza no manana crypto-vola, ny na inona na inona dia ho. Fa ny fividianana sy ny fivarotana, dia sao ho penitra. Ny hevitra ankapobeny dia ny hoe dia ho ilaina ny hividy sy hivarotra fananan'ny amin'ny fifanakalozana ofisialy ary izany no hambara, ara-dalàna.”
Alexey Moiseyev – Minisitry ny Fitantanam-bola lefitra
Ny Minisitry ny Fitantanam-bola nanolotra ny volavolan-dalàna ny Crypto-vola tamin'ny volana Desambra 2017, ny tahirin-kevitra dia atolotra ny Duma-panjakana tamin'ny volana Febroary 2018. Ny Ministeran'ny mino fa crypto-vola dia tokony ho raisina property, tsy vola, ary ny fitrandrahana – latsaka ambany ny famaritana ny asa aman-draharaha amin'ny hetra manokana.
Arkansas mahazo Bitcoin voalohany ATM
In Arkansas’ trano avo indrindra mipetraka voalohany bitcoin milina ao amin'ny fanjakana.
Ny milina efa mby ny saina hatramin'ny Novambra izany rehefa napetraka tao an-jorony Store sy ny maro hafa teo amin'ny tany rihana ny 40 rihana tao afovoan-tanànan'i Simmons Tower Little Rock.
“I efa nahazo betsaka tongotra fifamoivoizana izany,” hoy mpitantana fivarotana Connie Davis.
Ny milina dia tompony Freedom Coin Inc., izay manana birao akaikin'ny Simmons Tower.
Chris Sweeney, mpiara-manorina sy lehiben'ny mpanatanteraka tandapan'i Freedom Coin Inc., ary K.C. Surrett, ny Filoha sy ny lehiben'ny mpiandraikitra ara-bola, hoy izy ireo mihevitra ny hametraka 10-15 kokoa ny milina any amin'ny faritra avaratrandrefan'i Arkansas, Fort Smith, Jonesboro sy ireo tanàn-dehibe faritra Arkansas.
“Mino aho fa ny malaza dia ny hoe fifanarahana ara-barotra hoavy voahozongozona ny vidiny,” hoy Sweeney.
“Izany ho ara-dalàna toy ny U.S. Sandam-bola,” Said Duszota, misy eo an-toerana ny olona Arkansas, ny Bitcoin ATM mpanjifa izay nitafatafa tao an-toerana.
Korea Atsimo: Tsy mikasa ny handrara cryptocurrency
Ity herinandro ity, maro famoaham-baovao mahazatra dia nitatitra fa ny governemanta Koreana Tatsimo dia mikasa ny handrara cryptocurrency varotra. Izany no antoka fa tsy ny raharaha, araka ny tolo-dalàna dia tokony handeha voalohany Kongresy dieny mbola tsy afaka ho raisina-kery.
Araka ny efa nataony hatramin'ny Desambra 13 ny 2017, Korea Atsimo fanompoana fotsiny manomana volavolan-dalàna izay mety hanakatona cryptocurrency sasany fifanakalozana. Tsy mikasa ny handrara cryptocurrency raharaham-barotra tany amin'ny fohy ezaka.
Raha toa ny governemanta Koreana Atsimo natao handrara cryptocurrency varotra, dia ho nanao izany Desambra 13, fa tsy nanafaka fitsipika rafitra isan-karazany izay ahitana ny fandraràna ny vahiny varotra cryptocurrencies.
CCN nanambara ny fitsipika lehibe efatra rafitra ny governemanta Koreana Atsimo no andrasana ho fampiharana ny Janoary 20:
– Hisorohana unaccredited mpampiasa vola avy rehefa mifandray amin'ny fahaverezana amin'ny alalan'ny tena mikorontana cryptocurrencies.
– Nifehy tanteraka hisorohana cryptocurrency fifanakalozana tsy miasa ho saintsainina sehatra ho an'ny mpampiasa vola unaccredited.
– Request banky sy fifanakalozana mba hahazoana antoka underaged mpampiasa vola ary ny hafa firenena tsy afaka misokatra ara-barotra eo amin'ny cryptocurrency fifanakalozana kaonty.
– Rafitra mpampiasa vola vetivety ny hampiato sy ny mpampiasa vola tsy mampiasa vola antsinjarany in cryptocurrencies.
Ny Korea Atsimo sy ny Minisitry ny Strategy bola dia nanamafy fa tsy miombon-kevitra ny soso-kevitra avy amin'ny Minisiteran'ny Fitsarana.
"Tsy mitovy hevitra toy ny Ministeran'ny Fitsarana amin'ny mety cryptocurrency fifanakalozana fandrarana,"Hoy MSF.
Azo inoana fa, cryptocurrency fandraràna ny tolo-kevitra ara-barotra dia tsy nomanina na nanaiky 'ny Korea Atsimo Ministeran'ny Strategy sy Finance.
New York olana cryp ...
Previous Post:Blockchain News 10 Janoary 2018
Next Post:Bitcoin Hardforks inona moa izany?